Chhaharaa | प्रचण्डलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रचण्डलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
काठमाडौं । छसस । खै कसरी विश्वास गर्ने नेपाली जनताले पूर्वजनमुक्ति सेनाका सर्वाेच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई । जनयुद्ध हाँक्दा प्रचण्डले के भनेका थिए, नेपाली जनता सामु ? पटक–पटक देशको कार्यकारीणी पदमा पुगे, के ति कुरा पुरा गरे ?
अझै पनि उनी जनताबी जान्छन्, ढाँटकै खेती गर्छन् । तमु ल्होसारमा जान्छन् – अब प्रधानमन्त्री हुने पालो गुरुङको भनिदिन्छन् । किरात राईको कार्यक्रममा जान्छन् – अब प्रधानमन्त्रीहुने पालो राईको भन्न छुटाउँदैनन् । याक्थुङ चुम्लुङमा पुग्छन्– अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो लिम्बूको आइगयो भनिदिन्छन् । म अरु बाहुन जस्तो संकीर्ण विचार बोकेको बाहुन होइन, विशाल छाति र उदार मन लिएको बाहुन हुँद भन्दै जुनजुन समुदायको कार्यक्रममा पुग्छन् त्यही त्यही समुदायलाई आश्वस्थ र फुर्काउने काम गर्दछन् । तर व्यवहारमा भने उनी कस्ता बाहुन हुन भन्ने कुरा उनकै कार्यकालमा विभिन्न निकायहरुमा गरिएको राजनैतिक नियुक्तिहरु केलाएर हेरे पनि ‘प्रचण्ड’को छाति, मन, बचन र व्यवहार कस्तो छ भन्ने बारे घामझै छर्लंग हुने नै छ ।
पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड कतिसम्म ढाँटको खेति गर्छन भन्ने कुराको पुष्टि त उनले गरेको गफ र देखाएको व्यवहारबाटै पनि पुष्टि हुन्छ । एक पटक उनी काठमाडौंमा सम्पन्न किरात राई यायोक्खाको कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण पश्चात– भेलालाई सम्बोधन गर्दै भन्छन् ‘प्रदेश १ को नाम किरात नै रहन्छ । १ नं. प्रदेशवासीहरु ढुक्क रहे हुन्छ । नेपालको इतिहासमा किरात छैन भने त्यो अधुरै रहन्छ । मुलुकको इतिहास र सभ्यता यलम्बरसँग जोडिएको छ । किरात शब्द ईतिहास, सभ्यता, संस्कृति र जीवन प्रणालीसँग जोडिएको छ । त्यसैले प्रदेश १ को नामाकरण ‘किरात’ नै हुन्छ । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् ।”
प्रचण्डको यो भनाई छि दर्शक दिर्घाबाट तालिको पर्रा छुटेको अहिले जस्तो लाग्छ यो संवाददातालाई । अहिले मात्र उनी ओली गुटसँग भागभण्डा नमिलेपछि सत्ता बाहिर भएको जस्तो–जस्तो देखिन्छन् । यो सम्बोधन गरेको समयताका त प्रचण्ड राणाकालिन नेपालको जंगबहादुर भन्दा कम शक्तिशाली थिएनन् । त्यस्ता व्यक्तिबाट १ नं. प्रदेशको नाम किरात प्रदेश नै हुन्छ भनेपछि नपत्याउने कुरै भएन । अर्थात उनले गरे के हुदैनथ्यो ? तत्कालिन समयमा । पछि मात्र थाहा भयो प्रचण्डको भनाइ एकातर्फ, व्यवहार अर्कैतर्फ हुने रहेछ भनेर ।